Itoobiya oo Maxkamad la Hor Keenay Suxufiyiin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Itoobiya oo Maxkamad la Hor Keenay Suxufiyiin
La daabacay tisdag 18 oktober 2011 kl 13.35
Kadib kolkii ay saacad socotay dacwaddii maxkamadda ee la hor-keenay labada suxufi ee iswiidhishka, laguna qaadayay luuqadda amxaariga, kana mid ah luuqadaha looga hadlo dalka Itoobiya ayaa la xiray oo dib loo dhigay illaa iyo maalinta khamiista. Go'aankaasi ayuu ugu wacnaa iyada oo laba nin oo soomaali ah kana mid ahaa eedeeysaneyaashii aaney heysan cid u doodda ama gar-yaqaanno, sida ku cad war laga soo xigtay hayadda wararka ee TT.
Goobta maxkammadu ka dhaceeysay ayey ku sugnaayeen suxufiyiin tira badan ee dalkan ka baqoolay, iyadoona uu bilowgii maxkamadda dib u dhac ku yimiday maadaama tirada dadka aawadood loo bedely qol ka weyn si boos loogu helo, ayna bilaabatay siddeedii iyo tobankii aroornimo. Waxaa sidoo kale maxkamadda goob joog ka ahaa safiirro.
Kjetil Tronvol, ahna caalin ka howl-gala jaamicadda Oslo, kuna takhasusay culuunta Itoobiya ayaa mar ay shalay wareeysatay laanta Istudio Ett ee raadiyaha Iswiidhen uu u sheegay in dalka Itoobiya aannu u dhaga-nugleeyn culeeys dibadda kaga yimaada ama laga soo saaro:
- Aad buu middaa dareenkooda ugu yar yahay. Intaa waxaa dheer in madaxa dawladda Itoobiya Meles Zenawi uu siyaasaddiisa kalsooni buuxda ku qabo aanuna ku dhaqmin culeys dibadda kaga yimaada.
Waa mid aad u yar suurtagalka ah in oodda laga qaado labadn suxufi, sida uu sheegay Kjetil Tronvol:
- Waxaan u arkaa in suurtagalkaasi aad u yar yahay.
Haddii uu suurtagalkaasi jiri lahaana hore ayaannu u maqli lahayn maanta ama berito. Waxay ahaan lahayd calaamad heshiis dhex maray dawladda Itoobiya iyo Iswiidhen ee garyaqaanka loo soo dhiibay si uu u akhriyo. Haddii uu mar gaaray dhanka xeerka waxay iila muuqataa inuu xukun ku dhici doono.
Kjetil Tronvol ayaa sidoo kale wareeysiga uu siiyay laanta Istudio Ett ku sheegay in haddii xukun ku dhaco uu noqon doono mid u dhaxeeya 10 illaa 20 sannadood. Isagoona intaa ku daray in haddii taasi dhacdo muddo yar dabadeed ay dhici karto in cafis guud loo fidiyo ooddana laga qaado.
- Kolkaa waxay dawladda Itoobiya shaabadeeysay tusaale in suxufiyiintani sharcidarro dalka ku soo galeen, iyaga oo weliba la shaqeeynayey urur argagixiso.
Waxay ila tahay in lagu xukumi doono 15 illaa iyo 20 sannadood. Dawladdu waxay muujisay mowqifkeeda sheegtayna in xeerka loo siman yahay. Wixii intaa ka dambeeya waxy u ooli doontaa diplamaasiyadda, iyadoona oodda laga qaadi doono muddo yar dabadeed.
Tallaabadaa ayey ugu wacnaan doontaa in dawladda Itoobiya aanay dooneyn indhaha lagu hayo iyo in laba suxufi oo caalamiya ey xabsiyadeeda ku sugan yihiin.
Dacwadda dib la isugu soo noqon doono maalinta khamiista waxay un noqon doontaa mid u dhiganta middii maanta, iyadoona kolka labada nin ee kale ee maxkamadda lala hor keeni doonaa helaan gar-yaqaanno. Wixii intaa ka dambeeya ayay howshu qaadan doontaa lix bilood, sida uu sheegay Seleshi Ketsela, kana mid ah saddexda gar-yaqaan ee difaacaya suxufiyiinta iswiidhishka.